Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo cambaareeyey dilkii xalay Muqdisho loogu geystay Abkoow Cambuure | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo cambaareeyey dilkii xalay Muqdisho loogu geystay Abkoow Cambuure
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraal uu soo saaray ku cambaareeyey dilkii xalay Muqdisho loogu geystay Allaha u naxariistee Abkoow Cambuure oo ahaa sarkaal ka tirsanaa booliska Soomaaliya.
Sarkaalkaas waxaa la sheegay in askari ka tirsan NISA uu toogtay xilli uu marayey meel u dhaw taallada Daljirka Daahsoon ee magaalada Muqdisho.
“Waxaan canbaareynayaa dilka ula kaca ah oo ciidan ka tirsan taliska nabadsugiddu u geysteen muwaaddin Abkow Canbuure. Abkow waxaa dilay ciidankii maalmo ka hor xoogga ku qabsaday Daljirka Dahsoon si ay uga hortagaan muddaaharaadkii 19kii Febraayo. Allaha u naxariisto Abkow, sabar iyo iimaanna Allaha ka siiyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa intaba,” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Wararka qaar ayaa sheegaya in sarkaalka ay rasaastu uga fakatay askariga dilay, balse xildhibaan Cabdulqaadir Carabow oo ka mid ah dadka ka hadlay ayaa dowladda ka dalbaday in la baaro sababta ka dambeysay dilka marxuumka.
Dhanka kale Guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir, Basma Caamir Shakeeti ayaa ka tacsiyadeeysay geerida sarkaalkan, waxayna laamaha amniga ka codsatay in cadaaladda horkeeno dadkii ka dambeeyay dilkaas.
Previous articleDowlada oo ku eedaysay Puntland iyo Jubbaland inay diideen casuumaddii uu u fidiyey madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday..
Next articleWasiirka Dubbe oo u jawaabay dowladda Imaaraadka Carabta..
Sacuudiga oo muddooyinkii u dambeeyey u muuqanayay inuu dabciyay shuruucdii islaamiga ee dalkaasi lagaga dhaqmi jiray ayaa mar kale sharci ay soo saartay waxaa...
Al-Shabaab oo hoobiyeyaal ku weeraray Magaalada Awdheegle
Madaxweynaha Hirshabeelle iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaala ...